ရာမည လှဧကရီလေး ကျော့ကျော့ခိုင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ဟင်္သာမီဒီယာ။ ။ အခု မွန်ပြည်နယ် 4’th Miss Universe Mawlamyine 2018 ရဲ့ Winner ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် ပြောချင်တဲ့စကားများရှိရင် ?
မကျော့ကျော့ခိုင် ။ ။ ညီမအခုလို Miss Universe Mawlamyine 2018 Winner ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အတိုင်းအထက်အလွန် ဝမ်းသာပါတယ်။ တကယ်ကို လုံးဝမထင်မှတ်ထားဘူး။ ညီမ 2015 တုန်းကလည်း ပြိုင်တယ်။ 2nd Runner Up ရခဲ့တယ်။ ဒီကြားထဲမှာတော့ မပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ပညာရေးအတွက် ကျောင်းတက်နေရလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ကျောင်းပြီးမှပဲ ဒီနှစ်ပြန်ပြီး အစစအရာရာ အားလုံးပြင်ဆင် ချိတ်ဆက်ပြီး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီညမှာ Winner ဖြစ်သွားရတဲ့အတွက် တကယ် လုံးဝ အတိုင်းမသိဘူး၊ ပြောပြမတတ်လောက်အောင် ဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်။
ဟင်္သာမီဒီယာ။ ။ ညီမ အခုလိုရွေးချယ်ခံရအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ရလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။
မကျော့ကျော့ခိုင် ။ ။ ဒီ Winner ရခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်း ညီမတစ်ယောက်တည်းရဲ့ကြိုးစားမှုတစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ညီမကို ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး ပံ့ပိုးကူညီပြင်ဆင်ပေးတဲ့ သူတွေကြောင့်ပါ။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဆိုရင် သူတို့တွေရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီပေးမှု ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ညီမရဲ့ လုံးဝ ဝီရိယ တကယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေနဲ့ ပူးပေါင်းလို့ ဒီလို Winner ဆုကို ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟင်္သာမီဒီယာ။ ။ ညီမအနေနဲ့ အဓိက အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိခဲ့သူတွေကို ဘာများ ပြောပြချင်ပါသလဲ။ ဘယ်သူတွေကိုလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါလား။
မကျော့ကျော့ခိုင် ။ ။ ညီမကျေးဇူးတင်ရမယ့် သူတွေအများကြီးပါပဲ။ ပထမဦးဆုံး ကျေးဇူးတင်ရမှာကတော့ အဖေနဲ့အမေကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ အဖေက မရှိတော့ပေမယ့်လည်း ဒီလိုအရမ်းဖြစ်စေချင်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့သမီးကို ဒီလိုအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ် အရမ်းရောက်စေချင်ပါတယ်။
ဒုတိယကျေးဇူးတင်တဲ့သူကတော့ ညီမရဲ့ အစ်ကို မိတ်ကပ်ကြည်လင်အောင်ကိုလည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူကကြတော့ ညီမရဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်အနေနဲ့တောင် မဟုတ်ဘူး။ ညီမရဲ့ အမေလိုရော အဖေလိုရော အစ်ကိုလိုရော အစ်မလိုရော ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုကြတော့ ညီမကိုယ်ညီမ ကျေးဇူးတင်တယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ညီမနဲ့ အတူယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ ၊ ညီမကို အားပေးတဲ့ မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ ဒီကနေပြီး ပြောချင်ပါတယ်။
ဟင်္သာမီဒီယာ။ ။ ညီမနဲ့ အတူ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ညီအစ်မတွေကိုရော ပြောချင်တဲ့ စကားများရှိရင် ပြောပေးပါ။
မကျော့ကျော့ခိုင် ။ ။ ညီမအတူ လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ သူတွေနဲ့ ၁၀ ရက်လောက်သာ အတူတူလေ့ကျင့်ရပေမယ့် တကယ့်မောင်နှမရင်းချာလို မိသားတစ်စုတည်းတွေလို နေခဲ့ရလို့ နောက်လည်း အမြဲတမ်း အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘဲ ဒီလိုရှိချင်ပါတယ်။
သူတို့တွေကလည်း ဒီနှစ်မှာမရလိုက်ပေမယ့်လည်း နောက်နှစ်နောက်နှစ်တွေမှာ စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ ဒီလိုကောင်းတဲ့ ပဲွဲတွေ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ အခြားမြို့တွေမှာလည်း Miss Universe မဟုတ်ဘဲ အခြားပွဲတွေ အများကြီးရှိနေသေးပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အခြားပွဲတွေကိုလည်း ပြန်ပြီး ချိတ်ဆက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေ အားသာချက်တွေကို ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို အားသာချက်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပါ။ အားသာချက်ကိုလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် ပိုပြီးတော့ အားပေးလာအောင် သိလာအောင် ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းကို သေသေချာချာလေး ကြိုးစားပြင်ဆင်ပြီးတော့ ပွဲတွေ ပွဲအများကြီးတွေဆီမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်စေချင်ပါတယ်ရှင့်။
ပွဲတွေကလည်း ဒီလိုဒီလို ခေတ်တွေမှာ Miss ပြိုင်ပွဲတွေ အရမ်းများလာတဲ့အတွက် ရွေးချယ်စရာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Miss ပြိုင်ပွဲတွေကို သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးတော့မှ အစစအရာရာ ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ ညီမတွေဖြစ်ဖြစ် အစ်မတွေဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ လမ်းကို တကယ် ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင် လျှောက်လှမ်းဖို့ အတွက် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဟင်္သာမီဒီယာ။ ။ ညီမ နောက်ပွဲတွေ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ထားပါသလဲ။
မကျော့ကျော့ခိုင် ။ ။ ညီမ Winner ရသွားပြီးဆိုတော့ Organization အတွက် ထပ်ပြီး ကြိုးစားစရာတွေ အများကြီး လုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ ရန်ကုန်မှာ ထပ်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက်ကို ညီမကို Body လေ့ကျင့်မှုတွေ အလှအပတွေအတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်တယ်။
ဟင်္သာမီဒီယာ။ ။ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာများ ရှိရင်?
ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ညီမရပ်တည်နေနိုင်တာဟာ ညီမတစ်ယောက်တည်းရဲ့ ခွန်အားတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူး။ ပံ့ပိုးပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံး နေရာအသီးသီးမှာရှိနေကြပါတယ်။
Written by ေခတ်မင်း
ယခင်ဆောင်းပါးမြေယာကျူးကျော်နှင့် လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်မှာစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် စိန်ခေါ်ချက်ဟုဆို
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးတက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်ချက် မြင့်မားစေရန် မိဘများ ကူညီရန် လို